Du'a Jamaal Khashojii : Gaazexeessaan kun ajjeefamuu Sa'udiin dhugoomte - BBC News Afaan Oromoo
Dhimma ajjeefamuu gaazexeessaa Jamaal Khashojii sakatta'anii dhugaa jiru ifatti baasuu ilaalchisee hojiin hojjetamaa ture kan harkifatee fi amanamummaan kan itti hanqatu ta'uusaa Sa'uudii Arabiyaan beeksiste.
Dhimmi akka addunyaatti mata duree oduu ta'ee jiru kana dafanii qoratanii ifa baasuu dhabuun maqaa biyyattii akka balleessus ibsiteetti.
Ministirri Dhimma Alaa biyyattii Adel Al-Jubeer Fooksi Niwusitti akka himanitti wanti raawwatame dogongora guddaa ta'uu himanii, oduu mootii sa'uudiitu ajjeefamuu gaazexeessichaa ajaje jedhu garuu haalaniiru.
Gaazexeessaa Imbaasii biyyasaa keessatti ajjeefame
Sa'uudii Arabiyaan ajjeefamuu gaazexeessichaarratti akka ibsa kennituuf dhiibbaan garagaraa irratti godhamaa ture, inumaa gara jalqabaa gaazexeessaan kun lubbuun jira jechaa turte.
Gaazexeessan kun yeroo dhumaaf kan argame gaafa Onkoloolessaa 2, bara 2018 ,Waajjira Qoonsilaa Sa'uudii Arabiyaa kan Istaanbul jiru wayita seenutti ture
Aanga'oonni Tarkii gaazexeessaan kun mootummaa Sa'uudii qeequun beekama jedhan, garee bakka buutota mootummaa Sa'uudii kan gamoo inni keessa seene keessa turaniin akka ajjeefames dubbatan.
Sa'udiin gaazexeessichi jalqaba utuu homaa hin ta'in gamoo sana keessaa ba'eera jette, garuu jimaata darbemmoo ajjeefamuusaa ibsitee turte, xiyyaara keessatti ajjeefame jette garuu.
Dubbiin sa'uudii kun amma xiyyeeffannaan ilaalamuu eegaleera.
Ministirri Dhimma Alaa Sa'uudii Adel Al-jubeer nama yakka kana raawwate seeratti dhiyeessuuf mootummaansaanii xiyyeeffannaan hojjeta jedhan.
''Namoonni dhuunfaa waan kana raawwatan beekamtii keenyaan ala. Dogongorri guddaan hojjetame yoo jiraate dubbicha dhoksuuf yaaluudha'' jedhan.
Dhimma kanaan walqabatee Sa'uudii Arabiyaan namoota 18 hiiteetti. Gargaartota Mohammad bin Salmaan lama ammoo hariiteetti.
Sanbata Gaazexeessaa Washingitan Posti irratti yaada kan kennan Pirezidaantiin Ameerkaa Doonaaldi Tiraampi, kanaan dura dubbii Sa'uudii akka amanaa turan himanii, ajjeefamuu gaazexeessaa kanaan qalqabatee garuu odeeffannoon ba'aa ture kan dharaa fi gowwoomsaa of keessaa qabuudha jedhan.
Pirezidaanti Tiraampi dhimma kanaan walqabatee qoqqobbii Sa'uudiirra kaa'uuf yaada akka qaban ibsanis, garuummoo faayidaasaarra miidhaansaatu caala jedhan.
UK, Firaansii fi Jarmaniin ajjeefamuu gaazexeesichaa ilaalchisee ibsi bal'aan akka kennamu barbaanna jedhan.
Pirezidaantiin Tarkii Xayyid Erdoogaan paarlaamaa guyyaa borirratti dhugaa jirtu akka lafa kaa'an ibsaniiru.
Goodayyaa suuraa Ministira Dhimma Alaa Adel al-Jubeir